सम्बन्ध विच्छेद गरी छुट्टै बसेकी श्रीमतीले श्रीमानलाइ मध्यरातमा फोन गर्दै भनिन्, ‘ए.. हजुर ! प्रेसरको दबाइ लिइरहनुभएको छ नि ?’ – Sandesh Press
November 19, 2021 297
तर ‘कसैले उनी । बाबा, छोरी, छोरा सबै सुत्छन् । सोही रात फेरि मिसकल आउँछ । ’अब त भएन है यसलार्ई थर्काउनु पऱ्यो भन्दै छोरी र छोराले फोन फर्काउन खोज्छन्, बाबाले फोन लिँदै ‘म कुरा गर्छु को रहेछ यति राति सधैं मिस कल गर्ने’ भन्छन् ।
बच्चाहरू झस्किन्छन् । ‘बाबा.. किन मामुले हजुरलाई मिसकल गरेको ? उहाँले हजुरसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर अर्कैसँग विवाह गर्नुभएको होइन र ? हामीलाई थाहा छ । अहिले किन मिसकल गरेर दुःख दिएको होला ?’ छोराछोरीको कुरा सुनेर बाबा भन्छन्, ‘हेर.. तिम्री आमाको सम्बन्ध मसँग विच्छेद भएको हो तिमीहरूसँग होइन, आमा हो! तिमीहरूले मानमर्यादा राख्नैपर्छ ।’
Prevआज चन्द्रमामा पृथ्वीको छाँया पर्ने गरि ५८० वर्षपछि लाग्दै छ चन्द्र ग्रहण, कुन राशिलाई कस्तो छ असर ? पुरा पढ्नुहोस